2 Ao amin’ny fianakaviana (ohatra avy amin’ny Testamenta Taloha)
2.7 Vehivavy iray tsara fitondrantena (Ohabolana 31:10-31)
2.8 Ny fianakaviana
3 Amin’ny namana (Ohatra avy amin’ny Testamenta Taloha)
3.1 Joba sy ireo namany
3.2 Samoela sy Davida tany Naiota (1 Samoela 19:18)
3.3 Abigaila (1 Samoela 25)
3.5 Ahitofela, Hosay (2 Samoela 15:31-37 ; 16:15-17, 23)
3.6 Jonadaba (2 Samoela 13:3-5, 32-33)
3.8 Ebeda-meleka (Jeremia 38:7-13)
4 Eo amin’ny fiangonana eo an-toerana (iombonana— ohatra avy amin’ny Testamenta Vaovao)
4.1 Ny teny ataontsika
4.1.1 Ny fahafaliana
4.1.2 Manarona (1 Petera 4:8 ; Jakoba 5:20b) — Manaratsy (1 Petera 2:1)
4.2 Fomba fihetsika, rivotra iainana
4.2.1 Mifaly, mitomany (Romana 12:15)
4.2.2 Famonjena ara-dalàna ny fivoriana (Hebreo 10:25) — Fahazarana mandao, Demasy (2 Timoty 4:10)
4.2.3 Ny fandraisana
4.3 Ny fandraisantsika ny asa fanompoana
5.1 Fitoriana ny filazantsara
5.1.1 Ireo sakana
5.2 Fifandraisana – Fijoroana ho vavolombelona
6 Eo amin’ny mpirahalahy (amin’ny tsirairay – ohatra avy amin’ny Testamenta Vaovao)
Ny Romana 16:1-2 dia miresaka amintsika momba an’i Foiby —anarana midika hoe “miramirana”— izay diakon’ny fiangonana tany Kenkrea ; nanampy olona maro izy ary nanampy ny apostoly koa. Ireo andininy 15 voalohany amin’io toko io dia toy ny santionan’ny tribonalin’i Kristy, izay hampisehoana mibaribary ny zava-tsoa rehetra novokarin’ny Tompo tao amin’ny olony tsirairay, ary koa ireo fahadisoany, mba hahatsapantsika fa lehibe ny fahasoavana namafana azy ireny tamin’ny ran’i Kristy. Moa ve tsy misy indraindray ao amin’ny fiangonana ireo lehilahy sy vehivavy miasa, ireo izay tsy manao na inona na inona, ary ireo izay... mampijaly ny hafa !
Ny Teny dia miresaka momba ny hoe “ho mpiahy”, in-droapolo eo ho eo, ary ny hoe “hanampy”, in-dimampolo eo ho eo. Andriamanitra dia efa manampy, toy ny ao amin’ny Salamo 33:20 : “Ny fanahintsika miandry an’i Jehovah ; famonjena antsika sy ampingantsika Izy”. Indraindray dia ny Tompo no manampy, ohatra ao amin’ny Hebreo 13:6 : “Jehovah no Mpamonjy ahy, ka tsy hatahotra aho ; inona no azon’ny olona atao amiko ?” Farany ao amin’ny Romana 8:26 dia izao no vakiantsika : “Ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika”.
Raha toa isika ka manana tombontsoa ho mpanampy, dia mety ho sakana ihany koa na ho fahatafintohinana : “Fa na zovy na zovy no hanafintohina na dia iray aza amin’ireny madinika mino Ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha anantonana vato lehibe ahodim-boriky fikosoham-bary ny vozony, ka alentika any amin’ny ranomasina lalina izy” (Matio 18:6). Andininy matotra, manetriketrika, azo atao aza hoe mampahatahotra : hanafintohina ny “iray amin’ireny madinika mino Ahy ireny” : na zaza izany, na tanora, na olona vao niova fo tsy ela. Mety ho “tonga fahatafintohinana ho an’ny malemy... mahatafintohina ny rahalahiko” (1 Korintiana 8:9, 13) koa aho.
Rehefa mieritreritra ireo mpino rehetra, na antitra na tanora, nifanena tamintsika nandritra ny fiainana iray manontolo isika, dia afaka manontany tena hoe : inona moa izy ireo tamiko, mpanampy sa sakana ? Ary izaho, mba inona aho tamin’izy ireo ? Fahatsiarovana maro izany ! Nivavaka ho antsika ireo ray aman-dreny ary nampianatra antsika zavatra avy amin’ny Teny, isanandro nandritra ny fahazazantsika sy ny fahatanorantsika —misy ireo vavaka tanteraka, ary ireo sasany kosa izay hovalian’Andriamanitra indray andro any, arakaraka ny fahasoavany ; angamba nisy teny tsara fipetraka, avy amina rahalahy na anabavy, na resaka natao tamin’ny mpino efa nahazo taona kokoa... ary nandritra ireo dingana rehetra nolalovana, inona ny hery nitaomantsika ny hafa, na tsapantsika izany na tsia ? Nampahery ve ny ohatra nomentsika raha niezaka “namantatra izay ankasitrahan’ny Tompo” isika ? Nohararaotintsika ve ny hilaza teny iray “ho amin’ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira” ? (Efesiana 5:10 ; Kolosiana 4:6).
Manan-danja lehibe koa ny fitondrantena, ny fomba fihetsika. Marihin'ny apostoly ireo Makedoniana, izay nanolotra ny tenany ho an’ny Tompo aloha, ao amin’ny 2 Korintiana 8:5 ; na dia tsy fantany aza dia ohatra ho an’ireo rahalahiny izy ireo tamin’izany.
Amin’ireo sakana, dia aoka homarihina ihany koa ny fitiavana izao tontolo izao ; fahavalon’ny fiainana ara-panahintsika io, ary mety ho fandrika ho an’ny hafa, raha tsy hiresaka ny fialonana aterak’izany. Ny 1 Petera 3:3-4 dia manantitra momba ny fitafiana ivelany, ny 1 Korintiana 15:33 dia mampitandrina antsika amin’ny “fikambanana amin’ny ratsy”. Aoka ho tadidiantsika koa fa “fandrafiana an’Andriamanitra ny fisakaizana amin’izao tontolo izao” (Jakoba 4:4).
Dia indro, fa nimamo i Noa, izay efa antitra (9:21). Korontana tao amin’ny fianakaviany. Sema sy Jafeta dia “nandrakotra” tam-pahamaotinana ilay faharatsiana. Fa i Hama kosa dia nampiseho izany ary nianjera taminy ny ozon’ny rainy. Sema sy Jafeta, ho an’i Noa, dia antom-pankasitrahana an’Andriamanitra —nandray tsodrano maharitra izy ireo. Nandritra ilay vanimpotoana sarotra sy feno fankahalana nanamboarana ny sambofiara, dia niray hatrany ilay fianakaviana. Taorian’ny fanafahana, taorian’ny safodrano, dia niditra an-tsehatra ny fahavalo, ary indrisy fa tonga fahatafintohinana ho an-janany i Noa.
Fianakaviana misaritaka no niverina indray tamin’ny làlan’i Kanana —nentin’i Rahely ny terafiman-drainy— i Jakoba dia niasa saina momba ny mety ho valifaty ataon’i Esao rahalahiny. Ka rehefa niteny Andriamanitra hoe : “’Miaingà, miakara any Betela ianao... ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao” (Genesisy 35:1), dia tonga saina i Jakoba tamin’ny farany fa, teo amin’ny fianakaviany, dia nanjaka “ireo andriamani-kafa”. Nalevina tao ambany hazo terebinta tany Sikema izy ireo. Niakatra nankany Betela ihany ilay fianakaviana, fa i Jakoba irery no nivavaka. Tsy ho tonga any amin’ny faran’ny dia i Rahely ; maty teny an-dàlana nankany Efrata, izay i Betlehema, izy (35:19). Nalàm-baraka i Dina (34:5) ; novonoin’i Simeona sy Levy tamin-kabibiana ireo lehilahy tao Sikema, ary “voaozona” ny fahatezerany (49:7). Nanitsakitsaka ny rainy i Robena, ary veriny ny fizokiany (35:22).
Ny mpanjaka dia tsy tokony hanana vady maro (Deoteronomia 17:17). Nanohitra izany didin’Andriamanitra izany i Davida, ary nanana vady maro, ny iray tamin’izy ireo dia jentilisa, Maka, zanakavavin’ny mpanjakan’i Gesora, izay ho renin’i Absaloma, izay hametraka olana maro ho an-drainy. Ilaina tokoa ny mampitandrina ireo zanatsika sy miambina am-bavaka mba tsy hifidy vady tsy an’ny Tompo izy ireo rehefa lehibe. Mety hitondra fahorian-dalina eo amin’ny fiainana iray manontolo izany.
Tany Hebrona dia nanan-janaka i Davida (2 Samoela 3:2-5) : raha mbola kely izy ireo dia nafindra tany Jerosalema. Koa dia tsy nanam-potoana ho azy ireo intsony ny mpanjaka. Nandifotra azy loatra ireo ady maro, ny fandrindrana ny fanjakana ary zavatra hafa maro. Nalemy izy tamin’ireo zanany. Tonga izy dia nanaiky ny fangatahan’i Amnona, ilay zanany lahimatoa. Mody narary ilehio, ary naniry mba hoe hanao mofo ho azy i Tamara anabaviny, hafa reny taminy (13:6-7) ; tsy nanana faharanitan-tsaina ny mpanjaka ary tsy nahita ilay fandrika nataon-janany ho an’ilay tovovavy, izay ho halàny baraka, ary vao mainka aza namorainy ny tetika nataony. Vontom-pahoriana i Tamara nipetraka tao an-tranon’i Absaloma anadahiny. Tena sosotra tamin’izany i Davida, kanefa dia tsy nisy fepetra noraisiny.
Izao no lazaina amintsika momba an’i Adonia, mpandova fahefatra, izay nanohitra ny rainy ka nitsangana ho mpanjaka talohan’ny fahafatesany : “Ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatrizay niainany” (1 Mpanjaka 1. 6).
Mifanohitra amin’izany kosa, nisy vehivavy roa, vadin’ny mpanjakan’ny Israely, izay tsy vitan’ny hoe sakana, fa tena antambo ho an’ny vadiny sy ny fianakaviany. I Ahaba dia nanambady an’i Jezebela, zanakavavin’ny mpanjakan’ny Sidoniana (1 Mpanjaka 16. 31) ; nampirisihiny hanompo sampy izy. Tonga hatramin’ny fananganana alitara ho an’i Bala tao Samaria aza i Ahaba. Rehefa nandeha ny fotoana, dia “nivaro-tena hanao izay ratsy eo imason’i Jehovah [i Ahaba], satria nampirisihin’i Jezebela vadiny izy” (1 Mpanjaka 21. 25). I Jezebela dia nianjera avy teo am-baravarankely, ary lanin’ny alika (2 Mpanjaka 9. 36). I Jaosafata dia mpanjaka mpivavaka , amin’ny ankapobeny, nitondra fitahiana ho an’ny vahoakany. Kanefa, nanaiky izy ny hanambadian’ny zanany lahy Jehorama ny zanakavavin’i Ahaba (2 Tantara 21:6), ary “nanao izay ratsy eo imason’i Jehovah izy”. Nanjaka valo taona i Jehorama ary “lasa tsy nisy nalahelo azy izy” (2 Tantara 21:20).
Ny mpanjakan’ny Israely Omry, dia “nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohany” (1 Mpanjaka 16. 25). Izy no rain’i Ahaba sy Atalia (2 Tantara 22:2), izay renin’i Ahazia. Taorian’ny nahafatesan-janany, dia naringan’i Atalia avokoa ny zanak’andriana rehetra (2 Tantara 22:10). I Joasy, izay mbola zazakely, irery ihany no voavotry ny nenitoany Joseba (2 Mpanjaka 11. 2). Tamin’izany no nahafahan’i Atalia nanjaka tamin’ny tany. Io “vehivavy ratsy fanahy” io, niaraka tamin’ny zanany, no “efa nandrava ny tranon’Andriamanitra ; ary ny zavatra masina rehetra tao an-tranon’i Jehovah koa dia efa nateriny ho an’ireo Bala” (2 Tantara 24:7). Taorian’io fanjakany mahatsiravina io, dia novonoin’ireo mpanapaka ny miaramila tao an-tranon’ny mpanjaka izy (2 Tantara 23:15).
miresaka ny traikefany i Elifaza : “Araka izay efa hitako” (4:8). Tsy azony ny fijalian’i Joba.
Bilidada dia mandroso ny fomban-drazana : “Fa masìna ianao, anontanio ange ny ntaolo, ka fantaro ny hevitra hitan’ny razana... Tsy ireny va no hampianatra anao ?” (8:8-10).
Zofara dia niampanga mivantana. “Ary dia hiteny [ianao] hoe : ...Tsy nanan-tsiny teo imasonao aho. Enga anie ka... hiloa-bava hamaly anao [Andriamanitra]... Tsy dia novalian’Andriamanitra avokoa ny helokao” (11:4-6). Io ilay mpanara-dalàna : mitaky Andriamanitra ; manohitra anao Izy ; manan-trosa Aminy ianao.
Dia navelan’Andriamanitra nisy tena sakaiza, mbola tanora kokoa, hiseho : Eliho. Izy no hitondra an’i Joba eo anatrehan’Andriamanitra mba hahitany samirery ny vahaolana amin’ny zava-mangirifiry manjo azy. Nanosika an’ilay tovolahy ny fanahy tao anatiny (32:18), ny fofon’ain’ny Tsitoha no namelona azy (33:4).
Raha tonga teny an-tampon’ny tendrombohitra Oliva i Davida, dia nifanena tamin’ny sakaizany iray hafa, Hosay, ary nampirisihin’ilay mpanjaka ilehio hiverina any Jerosalema, mba hanapotika ny tetik’i Ahitofela. Taloha kelin’izany dia nivavaka tamin’i Jehovah i Davida momba izany (15:31). Namaly ilay vavaka Andriamanitra, ary nataony ho ny soso-kevitr’i Hosay no nandresy ny an’i Ahitofela. Namono tena i Ahitofela (17:23), ary Hosay kosa, ilay namana mahatoky, izay nanao sorona ny ainy tamin’ny niverenany tany amin’i Absaloma, dia mbola niaraka tamin’ny mpanjaka ihany. Ny zanany lahy, Bana, dia lasa iray tamin’ny mpiandraiki-draharahan’i Solomona (1 Mpanjaka 4. 16).
Nazera tao anaty lavaka famorian-drano i Jeremia, ary nilentika tany anaty fotaka ka efa ho faty (Fitomaniana 3. 52-54). Niantsoantso an’i Jehovah izy, Izay namaly hoe : “Aza matahotra”. Andriamanitra dia hampiasa an’i Ebeda-meleka, ilay ionoka Etiopiana tao an-tranon’ny mpanjaka. Tohina tamin’ny ratsy rehetra natao tamin’ilay mpaminany izy, ary niditra teo anoloan’i Zedekia mba hitalaho taminy ho an’ilay lehilahy mampalahelo, izay tiany ampiana. Nomen’ilay mpanjaka lehilahy telopolo izy hampiakatra an’i Jeremia avy tao an-davaka. Nikarakara tokoa i Ebeda-meleka, ka nitady lamba rovitra sy voro-damba mba hatao ao ambany helik’i Jeremia, eo ambanin’ireo tady, mba hisintonana azy avy eo amin’io lavaka izay hihazonan’ny fotaka azy io. Fanampiana tsara fipetraka avy amin’ny vahiny iray izay onena tamin’ny fahorian’ilay lehilahin’Andriamanitra. Fahamoram-po mampahatsiahy ny an’Andriamanitra momba ny vahoakany : “Tamin’ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia tamin’ny mahazakan’ny fitiavana” (Hosea 11:4). Tsy ho hadinon’Andriamanitra i Ebeda-meleka, ary nampanantena ny hamonjy azy Izy (Jeremia 39:16-18).
Fa ny hoe anisan’ny momba ny tena iray dia zavatra hafa mihitsy. Izany dia hoe anisan’ny zava-manan’aina iray —ary “Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin’ny tena araka ny sitrapony” (1 Korintiana 12:18). Tsy ny hamorona rafitra iray manana ny fitsipiny, ny fanekem-pinoany, na koa hanavao ireo didy, fa ny hivory satria nakamban’ny Tompo sy ny Fanahiny, ary Izy mihitsy no ivony : “Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia eo afovoany Aho” (Matio 18:20). Tsy voalaza hoe “niara-nivory” fa ara-bakiteny dia hoe “notarihina hiaraka” mankany (teny fameno manambara lalana) amin’ny anaran’i Jesosy. Ny Fanahy Masina no mahatonga io firaisana io, ary na dia vitsy aza ireo mpino izay mivory amin’io fanorenana io, mankasitraka ao am-pony fa iray ihany ireo rehetra rantsam-batan’ny tena, eo imason'Andriamanitra sy ny Tompo Jesosy, dia azo lazaina amin’izy ireo, toy ny tamin’ny Korintiana hoe : “Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy” (12:27) (*).
(*) Ny soratra ifotony dia milaza hoe : Ianareo no tenan’i Kristy, fa tsy hoe : Ianareo no ilay tenan’i Kristy.
Ny fihetsika sy ny rivotra iainana aterak’izany
Ny asa fanompoana (*)
(*) Ireo fanontaniana ireo dia valianay araka ny fomba iainana azy, fa tsy ara-poto-pampianarana, fa maro ireo boky miresaka izany).
Hoy ny Ohabolana 15:1 : “Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy ; fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana”. Ny Mpitsara 8. 1-3 dia mampahatsiahy antsika hoe ilay valinteny mora nataon’i Gideona dia nampitsahatra ny hatezeran’ireo Efraimita, fa ao amin’ny Mpitsara 12. 1-6 kosa, ny herisetran’i Jefta dia nahatonga ady an-trano.
Mihambo ny hanala ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahy ny olona (Matio 7:3-5). Hoy ny Tompo : “Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao.” Mora ny manakiana rahalahy iray noho ny fahadisoany tsy dia mankaiza loatra, nefa tsy mahatsiaro tena fa mbola lavitra dia lavitra ny hitovizanao amin’ny Tompo, na dia noho io fihetsika mampiseho fanambonian-tena io fotsiny ihany aza.
“Hampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony” ! (Matio 12:36).
Avy aiza moa ilay fahazarana, mateti-pitranga loatra, tsy handehanana ara-dalàna any amin’ireo fivoriana ? Miankina amin’ny fomba fandaminana ny fotoana izany. Ireo tanora dia hilaza fa mandany ny fotoanany rehetra ny fianarany. Kanefa, vitsy ireo vanim-potoana eo amin’ny fiainana izay araraotina kokoa noho izany, hananana ora vitsivitsy ao anatin’ny herinandro hivoriana. Rehefa tonga ny fanambadiana sy ny ankizy, ny zavatra tsy maintsy hatao eo amin’ny asa aman-draharaha, dia mbola ho be kokoa ny hery ilaina. Io famonjena ara-dalàna ny fivoriana io dia hitondra soa ho an’ny tena, fa ho fanampiana koa, fampaherezana ho an’ireo rahalahy sy anabavy. Ireo tsilo tamin’ny fanoharana : asa be loatra, fanahiana, fitsiriritana ny zavatr’izao tontolo izao, dia afaka mamono ilay voa vao mitsiry, mampihataka koa ny mpino amin’ny fiangonana. Izany no nanjo an’i Demasy izay “tia izao fiainana izao”, nilaozany ny apostoly ary lasa nankany Tesalonika izy, inona no tanjony ? Azo antoka aloha fa tsy nitondra fampaherezana tahaka ny famangian’i Timoty fahiny izy (1 Tesaloniana 3:2, 6).
Mandray am-pifaliana ireo izay maniry hanatona ny Mpamonjy, Izay mbola tsy fantany ; mandray ireo mbola malemy finoana, “nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny” (Romana 14:1) ; mahay mandrisika sy mampahery tanora maniry ny handray anjara eo amin’ny Latabatry ny Tompo, ary tsy mamela azy hiandry ela loatra alohan’ny hamelàna azy haka ny toerana izay efa novidian’ny Tompo ho azy. Ny olona toa an’i Diotrefa dia azo antoka fa tsy nitondra fanampiana mihitsy tao amin’ny fiangonana. Te ho lohany izy ; tsy noraisiny ireo rahalahy ary nosakanany izay te handray azy ireo. Sakana toa inona izany ao amin’ny fiangonana ! (3 Jaona 9-10).
Ny mpanompo, voalohany indrindra, dia antsoina hiseho “ho fianarana ny asa tsara, amin’ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamaotinana, ny teny tsy misy kilema” (Titosy 2. 7-8). Amin’izany izy dia tena ho mpanampy tokoa ireo rahalahiny, fa tsy ho toy ireo izay mitory filazantsara mifanohitra amin’ny notorian’i Paoly. Zava-doza tokoa izany, ary mety ho tratry ny ozon’Andriamanitra izay manampy ny Filazantsara, na manova izany : fa raha misy olona “mitory filazantsara aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voaozona izy” (Galatiana 1:8) ; ary raha toa misy olona mitarika anareo nefa tsy mitoetra ao amin’ny fampianaran’i Kristy, mankeo aminareo ka tsy mitondra izany fampianarana izany, dia aza mampiantrano azy akory (2 Jaona 9-10). Ny olona toy izany dia tsy vitan’ny hoe sakana, fa mety handiso ny Tenin’Andriamanitra, ary mety hanozongozona ny tena mpanompony aza.
Ny faminaniana, ny fahalalana, dia hitsahatra, fa “ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay” (13:8).
Sarotra ny hieritreritra hoe misy mpino tsy mankasitraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Izy no sakana, izy no tsy manana ilay fo onena ireo fanahy very, toy ny an’ny Tompo Jesosy raha nahita ireo vahoaka reraka sy nihahaka “toy ny ondry tsy misy mpiandry” (Matio 9:36). Tsy mitovy fihetseham-po Aminy ve isika ?
Avy teo amin’ny Tesaloniana ny Tenin’ny Tompo no nanakoako eran’i Akaia sy teny tontolo teny (1 Tesaloniana 1:8). Fa talohan’izany, dia nandray ny Teny noho ny asan’i Paoly aloha izy ireo (2:13) ; i Timoty no nanamafy orina ny finoan’izy ireo ; izany no vavaka nataon’ny apostoly ho azy ireo (3:2, 13). Nianatra ny fomba hizorana sy hanaovana ny sitrapon’Andriamanitra izy ireo (4:1). Ambonin’izany, dia tsy tian’ny apostoly “tsy ho fantatrareo” ny momba ny hakan’ny Tompo ny mpino hiaraka Aminy (4:16-17). Ny asa rehetra nataon’ny Teny sy ny Fanahy tao amin’ny fon’olona no nahatonga ny Filazantsaran’ny fahasoavana hiparitaka tamin’ny alalan’izy ireo.
Ny Galatiana 6:10, izay mampirisika antsika tsy ho sasatra ny “hanao soa”, dia manoritra hoe : “Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana”. Manana ny anjara toerany ny fanampiana ara-bola. Tsy lavina, araka ny nampianaran’i Jaona tao amin’ny epistiliny voalohany, fa atao amin’ireo rahalahintsika mila izany aloha. Fa ity andininy ity koa dia milaza hoe : amin’ny olona rehetra, “araka ny ananantsika andro hanaovana”. Ny fanampiana entintsika amin’olona mila izany, izay napetraka teo anoloantsika, dia mety hanokatra varavarana hitoriana ny Filazantsara.
Misy lanjany tokoa ny fitondrantenantsika rehetra. Hoy ny Tompo tamin’ireo mpianany : “Ianareo no fanasin’ny tany” (Matio 5:13). Tsy hoe : ianareo no tokony ho, fa : ianareo no. Enga anie ny mpino, amin’ny fitondrantenany rehetra eo amin’izao tontolo izao, mba ho ilay miaro amin’ny fahalovana sy manampy hanalavitra ny faharatsiana. Ny fitondrantena ratsy asehon’ny zanak’Andriamanitra dia sakana ho an’ny Filazantsara, ary mety ho tonga fahatafintohinana ho an’ny hafa.
Hoy koa ny Tompo Jesosy hoe : “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao”, fijoroana ho vavolombelona mangina nefa mazava, jiro apetraka eo amin’ny tavin-jiro fa tsy afenina any ambany vata (ny asa aman-draharaha) na ny fandriana (ny hakamoana) (Matio 5:14-16). Io jiro io dia “mazava ho an’izay rehetra ao an-trano” (and 15), ary koa ho an’ireo mpamangy (Lioka 8:16). Eo amin’izao tontolo izao dia mamirapitra ho an’ny rehetra izany. Mazava ho azy fa ny sakana tsy hamirapiratan’ilay jiro dia ny fitiavana izao tontolo izao sy ny zavatra eo amin’izao tontolo izao : “Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray” (1 Jaona 2:15).
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fahalalana ny Tenan’ny Tompo, dia “afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin’izao tontolo izao noho ny filàna” ny mpino (2 Petera 1:4). Mba hahamarina izany eo amin’ny fiainana, dia tsy tokony handeha “tahaka ny fandehan’ny jentilisa” intsony izy (Efesiana 4:17), manaiky fa hafa, tsy mandray anjara mavitrika amin’izay mety hampisaraka antsika amin’ny Tompo, tsy mandeha amin’ireo toerana izay tsy hiarahan'ny Tompo amintsika. Anisan’ny fijoroana ho vavolombelona koa izany : misaraka ara-moraly amin’izao tontolo izao mba ho an’Andriamanitra, nefa vonona, toy ny Tompo Jesosy, hanampy ireo izay lavitra Azy (Lioka 5:29-32).
Tsy ho vita izany fihetsika izany raha tsy noho ny finoana miasa, velona, mifikitra amin’ny Tompo : “Ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” (1 Jaona 5:4). Hafa noho ny an’izao tontolo izao ny tanjona sy ny fahafalian’ny finoana. Ho hafahafa ny fijerin’ny tsy mpino izany (1 Petera 4:4) ; tsy maintsy hamoaka ny momba azy ireo amin’Ilay vonona ny hitsara ny velona sy ny maty izy ireo. Fa mandra-piandry izany, dia ho nisy aloha ny fijoroana ho vavolombelona momba ny lanjan’izay nataon’Andriamanitra ho sarobidy ho an’ny fontsika, dia ny Zanany aloha.
Ao amin’ny Galatiana 2:11, dia tonga tany Antiokia i Kefasy. Fantany ny atao hoe fahafahana kristiana. Taloha izy dia tany amin’i Kornelio, notarihin’ny Fanahin’Andriamanitra ; avy eo izy dia nanazava tamin’ireo loholona tao Jerosalema ny fomba nitondrana azy. Koa dia niara-nihinana tamin’ireo jentilisa izy. Indro anefa fa nisy sasantsasany, “avy tany amin’i Jakoba”, izay tonga tao Antiokia ; olona fatra-panaraka ny lalàna sy ny fomban-drazana izy ireo. Dia natahotra i Kefasy. Nihatakataka niala tamin’ireo jentilisa izy ; tamin’izany izy dia nanjary sakana ho an’ireo jiosy hafa, na dia i Barnabasy aza, izay niara-nihatsaravelatsihy taminy. Navelan’i Kefasy ny fahamarinan’ny Filazantsara. Tsy maintsy niteny azy teo imasom-bahoaka i Paoly. Mety ho nanampy olona maro ny olona iray ; kanefa, raha tokony hatoky ny fankasitrahan’ny Tompo izy nefa mety ho voatariky ny fanarahan-dalàna, dia mety ho lasa sakana ho an’ireo rahalahiny. Mazava ho azy fa ho an’i Paoly sy Kefasy resahana eto amin’iy toko ity, dia fahamarinana fototra no voakasika, fa tsy hoe fomba fijery samihafa fotsiny, na fomba fandraisana tsy mitovy ny andininy sasany amin’ny Teny. Fa rehefa ny fahamarinana fototra, izay voalaza mazava tsara ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, no voakasika, dia tsy tokony hatahotra haneho ny fampianarana araka izay efa nomena antsika.
Eodia sy Syntyke (Filipiana 4:2-3) dia niara-niasa fatratra tamin’i Paoly teo amin’ny Filazantsara taloha. Ankehitriny dia misy tsy fifanarahan-tsaina eo amin’izy roa vavy, angamba fifandrafiana. Mitalaho ny apostoly, amin’izy roa vavy, mba hiray saina ao amin’ny Tompo, mba hitovy ny zavatra itodihan’ny sain’izy ireo. Mangataka koa izy mba hanampian’ilay “tena mpiara-miasa” aminy azy roa vavy. Tsy mora izany, kanefa raha toa ilay rahalahy nantsoina hanampy azy ireo afaka mivavaka miaraka amin’ny iray, avy eo miaraka amin’ilay iray hafa, raha afaka mitarika azy roa hiara-mivavaka, dia hisy dingana lehibe ho vita. Io fanampiana ao amin’ny mangingina io dia hisy vokany kokoa noho ny fanambarana ampahibemaso hoe : Fahatafintohinana izany tsy fifanarahan-tsain’ireo anabavy roa ireo, izay efa niara-niasa, mahamenatra ! Tsy manitatra na inona na inona, fa havohitra kosa ny tsara, toy ny ataon’ny Tompo ao amin’ny taratasy ao amin’ny Apokalypsy 2 sy 3 ; ary avy eo, mampirisika amin’ny fanetren-tena sy fitiavana mendrika haseho. Ny Tompo irery ihany no afaka mampiseho antsika izay tokony holazaintsika, sy koa ny fomba tokony hilazana izany.